चीनका अगाडी मोदीले आ’त्मस’म’र्प’ण गरेको खुलासा – Jagaran Nepal
चीनका अगाडी मोदीले आ’त्मस’म’र्प’ण गरेको खुलासा
एजेन्सि मंगलबार, आषाढ ०९, २०७७
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–चीन सीमा विवादका विषयमा आ’त्मसमर्पण गरेको खुलासा भएको छ । भारतिय कांग्रेस पार्टीका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेता राहुल गान्धिले त सिँधै नरेन्द्र मोदीको नाम नै सलेण्ड मोदी राखिदिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले चीनसँग आ’त्मासमर्पण गरे भन्ने समाचार सेयर गर्दै उनले लेखे नरेन्द्र मोदी वास्तबमै सरेन्डर मोदी । राहुलले मात्र हैन अहिले भारतमा चर्को आलोचना भैरहेको छ। भारत–चीन सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि मोदी एकाएक अलोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन् ।
पाकिस्तान, भुटान र नेपालजस्ता छिमेकीलाई आँखा देखाउने तर ड्रागनसँग ड’राएर आ’त्मसमर्पण गर्ने भन्दै भारतमा मोदीको अहिले चर्को विरोध भैरहेको छ । विषय निकै विवादित बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मोदीको भनाईलाई गलत अर्थ लगाएर अनावश्यक विवाद उत्पन्न गर्न खोजिएको भन्दै बयान बंग्याउन खोजेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको स्पष्टीकरण झनै विवादमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा लद्दाखस्थित भारततर्फको सीमाभित्र ‘न कसैको प्रवेश भएको छ, न कसैले हाम्रा पोष्टहरु कब्जा गरेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय राजनीतिक वृत्तमा विपक्षीहरुले मोदीको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । मोदीको अभिव्यक्तिले चीनलाई सपोर्ट गर्दै आ’त्मसमर्पण गरेको भन्ने अर्थ समेत विपक्षीहरुले लगाएका छन् । काँग्रेस नेता पी चिदम्बरमले सोधेका छन्– ‘यदि प्रधानमन्त्रीको कुरालाई सही मान्ने हो र भारतीय सीमानामा चिनियाँ सैनिक आएका थिएनन् भने झगडा किन भयो ? २० सैनिक शहिद किन भए ? दुई देशबीचको के कुराकानी भैरहेको थियो ?’
उता काँग्रेस नेता राहुल गान्धीले त लद्दाख घ’टनापछि लगातार प्रधानमन्त्री मोदीको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले शुक्रबार मोदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई चिनियाँ आ क्रमणका अघि आ’त्मसमर्पण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, इन्डियन एक्सप्रेसका सुशान्तसिंहले ट्वीटमार्फत भनेका छन्ः ‘त्यसो हो भने २० सैनिकको कसरी मृत्यु भयो ? ७६ जना घाइते भए, १० जनालाई चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लियो, यो कसरी भयो त ?’ त्यसैगरी सामरिक मामलाका जानकार ब्रम्हा चेल्लानीले पनि प्रधानमन्त्रीतर्फ प्रश्न गरेका छन्– ‘के मोदीको यो भनाईले भारतले गल्वान उपत्यकामा चीनको यथास्थितिमा भएको परिवर्तनलाई ज बर्जस्ती स्वीकारेको संकेत हो ?’
यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने मोदीको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै मोदीले जुन १५ तारिखको झ डपका सन्दर्भमा बोल्नुभएको स्पष्ट पारेको छ । शनिबार स्पष्टीकरण दिँदै कार्यालयले प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना सैनिकहरुको बहादुरीका कारण कुनै चिनियाँ सेना त्यसदिन भारतीय सीमाभित्र प्रवेश गर्न नपाएको भन्ने विषयलाई अनर्थ लगाउन खोजिएको भन्दै स्पष्ट पारेको हो । मोदीले भारतीय सैनिकहरु शहिद भएर पनि चिनियाँ सैनिकहरुको घु सपै ठलाई विफल पारिदिएको भन्न खोजेको कार्यालय स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार लद्दाख झ डप (गल्वान) को विषयमा केन्द्रीत रहँदै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा अलग अलग पार्टीका नेताहरु अनलाइनमार्फत बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनले भारतले शान्ति र मित्रता चाहने तर सार्वभौमिकताका विषयमा सम्झौता नगर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथसिंह, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी लगायतका २० दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेका थिए । चिनियाँ र भारतीय सैनिक बीच झ डपको घ’टनामा गान्धीले गुप्तचरहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । गान्धीले एलएसीको विषयमा कुराकानी गर्ने सबै अवसरहरु प्रयोग गर्न असफल भइएको र त्यसैको परिणामस्वरुप २० जनाको मृत्यु भएको बताएकी थिइन् । जुन १५ मा लद्दाखस्थित गल्वान उपत्यकामा दुई देशका सैनिकबीच भएको झ डपमा भारतीय सेनाका कर्णेलसहित २० जनाको मृ’त्यु भएको थियो । चिनियाँ सेनातर्फको क्षति विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!